A gam akporo 9 achịcha, ọ ga - aga n’ihu rue ụbọchị e wepụtara ya wee bụrụ ọkwa gọọmentị | Akụkọ akụrụngwa
A gam akporo 9 achịcha, ọ na-aga n'ihu maka ụbọchị mmalite a na-atụ anya ya ma bụrụ onye ọchịchị
Sourcesfọdụ isi mmalite tinye ọkwa mbụ nke ụdị a maka August 29 ọzọ, mana n'ikpeazụ ụdị gam akporo ọhụrụ, A gam akporo 9 achịcha, na eze ruru ndị ọrụ nwere Google Pixel dakọtara na ụdị ọhụrụ a.
Ndị ọrụ nwere ngwaọrụ nwere ụdị beta nke sistemụ arụmọrụ arụnyere ga-enwe ike ịnụ ụtọ ụdị nke OS ikpeazụ. N'oge anyị nwere ntọhapụ gọọmentị dị site na OTA.
Versiondị ọhụrụ ahụ na-abịa ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ dị mkpa na sistemụ ahụ na site na ihe anyi nwere ike ihu na ihe edeturu na webụsaịtị gọọmentị nke A gam akporo 9 achịcha, na anyị ahụlarị na beta ụdị ndị ewepụtara na mbụ akụkọ a na-elekwasị anya na igodo site na mmegharị, ngalaba ọhụụ maka ọkwa, nkwado maka smartphones nwere ọkwa, mmelite na njikarịcha nke akụrụngwa nke na-eme ka nri batrị dịkwuo mma, aro dị iche iche dị na ya Ọrụ Arụ Ọrụ, ndozi na nhazi nke ogo ihuenyo na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ọhụrụ n'ihe gbasara ọrụ kama ole na ole
Ihe omuma ndi a elebara anya na imeziwanye usoro mbu nke sistemụ arụmọrụ ya mere anyị nwere ike ịsị na akwụkwọ ọhụụ na ọrụ ahụ dị ole na ole. O doro anya na mmezi ọ bụla dị na ya maka sistemụ arụmọrụ nke na-elekwasị anya karịa idozi njehie site na ụdị gara aga ma melite arụmọrụ ya.
E nwere ụfọdụ ọrụ nke ọhụrụ a nke ka na-anwale ma ya mere adịghị maka ojiji, dị ka ikpe nke Mpekere ma ọ bụ Ọdịmma Dijitalụ, A na-atụ anya na n'oge na-adịghị anya ha ga-amalite ịrụ ọrụ na Pixel na emesịa na ekwentị niile na gam akporo One. N'ọnọdụ ọ bụla, ihe dị mkpa bụ na a ga-arụnyere ya na ọtụtụ ngwaọrụ dị ka o kwere mee na Google ozugbo na batrị niile batrị. na Banyere mmelite na ọtụtụ gam akporo smartphones.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » A gam akporo 9 achịcha, ọ na-aga n'ihu maka ụbọchị mmalite a na-atụ anya ya ma bụrụ onye ọchịchị
Achọpụtara ịnweta ihe omimi nke oke ike
Hadron Collider na-eme ka ngwa ngwa hydrogen mbụ ya nwee ngwa ngwa